ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အာဆီယံ-ကင်ဘာရာကော်မတီ သံအမတ်ကြီးများ တွေ့ဆုံ – Ministry of Foreign Affairs
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အာဆီယံ-ကင်ဘာရာကော်မတီ သံအမတ်ကြီးများ တွေ့ဆုံ
(၂-၁၂-၂၀၁၉ ရက်၊ ကင်ဘာရာမြို့)
အာဆီယံ-ကင်ဘာရာကော်မတီ (ASEAN Committee in Canberra-ACC) ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသာအောင်ညွန့် ဦးဆောင်လျက် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ သံရုံးအကြီးအကဲ များသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်တွင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ် The Hon. Mr. Scott Morrison အား ပါလီမန် အဆောက်အဦး၌ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Minister for Foreign Affairs နှင့် Minister for Women ဖြစ်သူ Senator the Hon. Marise Payne နှင့် Minister for Trade, Tourism and Investment ဖြစ်သူ Senator the Hon. Simon Birmingham တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် အာဆီယံ-ကင်ဘာရာကော်မတီ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ မြန်မာ သံအမတ်ကြီးမှ ရှေးဦးစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်မှ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အာဆီယံ-ဩစတြေးလျ အကျိုးတူကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။